Indira Shaha | Nepali Stories
Indira Shaha – Albida Hawi
इन्दिरा शाह – अलबिदा हावी
भेस्डिङ मेसिन -पैसा खसालेर बटन दबाउने मेसिन) बाट दुईवटा चिसो कोकको बोतल झिक्यो र एउटा मतिर बढायो । अर्को बिर्को खोलेर एक घुटको पियो । जुन महिनाको प्रचण्ड गर्मी थियो । खेतमा कुनै बाली लगाइएको थिएन, सायद लगाउने तयारीमा जुटेका थिए किसानहरू । किनकि छाता ओढेर अथवा ठूलो आकार भएको हृयाट लगाएर खेतमा केही काम गर्दै थिए ।
सहरबाट तीन-चार किलोमिटर टाढा एउटा कम्पनी थियो । त्यहाँ काम गर्ने मान्छे खोजेको छ भन्ने थाहा पाएपछि बिक्कीले आफ्नो साथीसँग त्यहाँ गएर बुझ्ने काम अह्राएको थियो । उसको साथी उसकै कम्पनीमा राति काम गर्दथ्यो र दिउँसो सुत्ने गर्दथ्यो । बिहानको दस-एघार बजेतिर उसले साइकल लिएर आयो र त्यहाँ जानलाई सोध्यो । दिउँसोको गर्मी साइकल यात्रा मेरो त होस उड्लाजस्तै भयो । तर बाध्यता थियो । कामको जरुरत, अपरिचित ठाउँ, उसको समय । चुपचाप आफ्नो साइकल डोर्याथएर उसको पछि लाग्नुको अर्को विकल्प थिएन ।
त्यो गुन्याकेनको कुनै एक ठाउँ थियो । सहरबाट नजिकै तर पैदल यात्रा गर्न मुस्किल हुने । जापानमा बाहिर देशबाट आउनेहरू धेरैजसो साइकल चढ्ने गर्छन् । सजिलोको लागि । हुनत गाडी किनेर चढनेहरू पनि प्रशस्तै छन्, गाडी धेरै सस्तोमा नै पाइहाल्छ । त्यहीँ नै उत्पादन गर्ने हुनाले होला धेरै महँगो पनि नपर्ने । तर ठाउँको अभावका कारण पार्किङको समस्या पर्दछ । त्यसैले नजिकै सामान्य किनमेलमा कति जापानिज पनि साइकल नै प्रयोग गर्दछन् । तर विदेशी अलि बढी नै गर्छन् ।
सहरका पेटी साइकलयात्री र पैदलयात्रीका लागि मात्र हुन्छन् । चिल्ला सडक र चिल्ला पेटीहरू, सुविधाका लागि ठाउँ ठाउँमा राखिएका सिंग्नल र जेब्राक्रसिङहरू, सबै प्रान्त र सबै ठाउँ उत्तिकै विकसित र उत्तिकै सुविधा सम्पन्न अर्थात् सुरक्षित सडक, सु्रक्षित पेटी अनि सुरक्षित यात्रा ।
अपार्टबाट निस्केर नजिकैको रेल्वे स्टेसनलाई पार गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ । ठूलो सडक सानो गल्ली अनि खुला फाँट र रहरलाग्ने गरी बनाइएका खेतका गरा, सायद धान रोप्ने तयारी हुँदैछ । खेतको बीचबाट गएको सडक पनि उत्तिकै चिल्लो र सफा छ । मनभरि आफ्नो देशको सडक र खेतबारीलाई सम्भिmँदै उसलाई पछ्याउँदै छु । खेतको फाँट विस्तारै पार हुने क्रममा छ । गर्मी सहिनसक्नु छ । ठूलो फाँटलाई पार गरेपछि सानो ढिस्कोजस्तो पहाड देखा पर्योह । हामी पुग्ने ठाउँ त्यहीँ हो उसले रोकिएर देखायो ।
सडक सम्मबाट अलिअलि उकालो हुन थाल्यो । बाटाका छेउछाउमा चार पाँचवटा घर पनि भेटिए । जङ्गल पनि रहेछ । घुमाउरो बाटो उकालो सकिएपछि डाँडामा केही रुखको बीचमा सानो घर छ, त्यो अफिस वा सम्पर्क कार्यालय रहेछ । धेरै मान्छे थिए । विदेशी, स्वदेशी सबै आउँदै र जाँदै थिए । हामी पनि अरुहरू जस्तै पछि लागेर भर्यामङ उक्लियौँ । एक तला माथि सम्पर्क अफिस । टेबुलको उतापट्ट िदुईजना बसेर केही लेख्दै अनि सबैको परिचयपत्र वा प्रमाणपत्रहरू हेर्दै थिए । आफ्नो परिचयपत्र दिइसकेपछि केके सोध्ने रहेछन् अनि कम्पनीको ड्रेस दिएपछि काम पक्का । मैले बोल्नै परेन सबै उसले बोल्यो । उनीहरूले बोलेको मैले बुझिन पनि । कुरा सकिएपछि एकजना ड्रेस खोज्न गयो, एकछिन पछि उसले आएर केके भन्यो त्यो पनि मैले बुझिन किनकि उनीहरू छिटोछिटो बोलिरहेका थिए । मसँग जाने मान्छेले चाहिँ अब हामी जाउँ, भोलि तिमी आफँै आएर डे्रस लिएर जाउ भनेपछि बल्ल थाहा पाएँ काम पाउने भएछ । उसले भनेछ तिम्रो साइजको डे्रस सकिएको छ भोलिमात्र आइपुग्छ । त्यसैले भोलि आएर ड्रेस लिएर जाउ र पर्सिदेखि मात्र काममा आउ ।
उसले शिर निहुरायो र आरिगात्तो गोजाइमास-धन्यवाद) भन्यो । मैले पनि उसकै अनुकरण गरेँ । हँसिलो अनुहार लाएर ऊ तल ओर्लियो । गोजीबाट सनग्लास झिक्यो लगायो र साइकल चढ्यो । म पनि उसको पछि लागेँ ।
फर्किने क्रममा उसले कोक किन्यो र चिसो कोक खाँदै साइकल चलायो । उसले सोध्यो- तिमी किन यहाँ आएको ? मैले भने पैसा कमाउन । किन तिम्रो देशमा काम छैन ? छ तर पैसा छैन । खान लाउन पुग्दैन ? तलब मात्रले पुग्दैन सरकारी नोकरीमा । प्राइभेटमा अलि बढी छ । तर मलाई यता आउन मन लागेर आएको । मैले सोधे- तिमी चाहिँ किन आएको ? उसले भन्यो मेरो पनि त्यस्तै समस्या हो । तर अलि फरक कारण पनि छ । उसले बोलेको बुझ्न मलाई गाह्रो पर्छ, तैपनि ध्यान दिएर सुन्छु टुटे फुटेको अङ्ग्रेजी र त्यस्तै छ जापनिज पनि । यतिसम्म त बु्झ्छु तर कतिपटक ऊ आफ्नै भाषा स्पेनिस बोल्छ जुन म एक छेउसम्म पनि बुझ्दिन तर पनि बुझेझैँ गर्छु किनकि उसको निरन्तरतामा बाधा दिन चाहन्न ।
उसले आफ्नो नाम हावियर बतायो । सबैले उसलाई हावी भन्छन् । तिमी पनि मलाई हावी भन्न सक्छौँ । मलाई पनि यहीँ छोटो नाम नै मनपर्छ । हावीको पुख्र्यौली घर पेरुको राजधानी लिभामा हो । अहिले उनीहरूले अर्को ठाउँमा पनि घर किनेका छन् । घरमा आमा, बुबा दुईजना भाइ, श्रीमती र दुईजना छोरी पनि छन् ।
उसले गोजीबाट पर्स निकाल्यो र साना छोरीहरूका फोटो देखायो । फोटोमा एकपटक चुम्यो र गोजीमा राख्यो । सायद उसका आँखा रसाए उसले कुरा अन्तै मोड्यो ।
तिमीहरूको देश त शान्त छ है ? मैले नेपालको बारेमा सुनेको छु । हाम्रोजस्तै गरिब भए पनि तिमीहरूको देशमा शान्ति छ जसले गर्दा सबजना आनन्दले परिवारका साथमा बस्न पाउँछन् । हामीजस्तो भाग्नु पर्दैन, पलायन हुनु पर्दैन, परिवारबाट टाढा बस्नु पर्दैन ।
मैले कुरो नबुझेको थाहापाएर उसले प्रस्ट्याउँदै भन्यो तिमीलाई साइनिङ पाथ थाहा छ ? मलाई थाहा छ, किन ? मैले सोधेँ । साइनिङ पाथका गुरिल्लाहरूले कति उपद्र मच्चाइरहेका छन् । त्यसबारे पनि पक्कै थाहा होला । कस्तो उपद्र ? त्यो त तिमी हामीजस्तै श्रमजीवीहरूको हकहितमा काम गर्ने सिद्धान्त भएको होइन र ? मैले त यस्तै सुनेको हो ।
अघिको उसको शान्त अनुहार विस्तारै रातो हुँदै गयो । ऊ आफ्नो भाषामा केके फतफताउन थाल्यो, मैले बुझ्दिन त्यो कुरा उसलाई पनि थाहा छ तर मैले चुपचाप सुनिरहेँ किनकि जसरी भए पनि मनभित्र बिझेको कुरा बाहिर ल्यायोभने मन हलुका हुन्छ, त्यसैले उसको मनको व्यथा पोखोस् भन्ने चाहन्थे, मैले नबुझेर के भयो र बुझे पनि गर्न नै के सकिन्छ र ? कतिपय आफ्नै कुरा बुझेर पनि केही गर्न सकिएको छैन । त्यसमा पनि उसलाई त मैले चिनेको पनि भर्खर मात्र, न त फेरि मेरो कुनै काम नै पर्छ उसँग । उसलाई भने मेरो मौनता उसको मन शान्तपार्ने माध्यम बन्यो । म यही सोच्दै चुपचाप सुन्दै थिएँ ।
एक छिन चुप लागेपछि बाँकी रहेको कोक पिउँदै मलाई बुझाउने प्रयत्नमा उही टुटेफुटेको अङ्ग्रेजी र उस्तै जापानिजमा बुझाउन थाल्यो ।
उसको भाइलाई साइनिङ पाथका गुरिल्लाले अपहरण गरी लगेछन् र उसलाई पनि खोज्दै गरेको बेला भागेर जापान पसेका रहेछन् । ऊ भागेर यता पसेपछि उसका बाबु र श्रीमतीलाई यातना दिइएछ, पैसाको पनि डिमान्ड गरेछन् । हुनेखाने परिवार भएकाले उनीहरूले भनेजति पैसा दिएपछि अहिले चुपचाप छन् । ऊ यता आएको पनि दुई वर्ष बितिसकेछ । परिवारलाई भेट्ने इच्छा असाध्यै लागेको छ । आमाको धेरै याद आउछ किनकि उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ ।
घाम पनि अघिकोभन्दा अलि नरम भएको छ । हल्का हावा चलेकाले पनि हो कि अलिअलि सजिलो महसुस भएको छ । खेतको फाँट अघिभन्दा बढी पार गरिसकेपछि सानो खोल्सोजस्तो छ जहाँ अलि अलि पानी बगिरहेको छ सायद कुलो हो कि । त्यसकै लागि निर्माण भएको सानो पुल छ र हामी त्यसकै छेउको पेटीमा बसेर कुरा गर्दैछौँ । त्यही खोल्सोमा उम्रेको एउटा सानो केको हो बोट छ कलिलो । त्यसकै छहारी पेटीमा परेको छ । हावाले हल्लाउँदा त्यो छहारी पनि यताउता सरिरहन्छ ।
उसको कुराले मेरो मन मर्माहत भएको छ । उभित्रको पीडा अब मभित्र पनि बिझ्न थालेको छ । आखिर जो जता बसे पनि मानवीय संवेदनाहरू उस्तै हुन्छन् क्यारे ।
म पनि यस्ता धेरै घटनाको साक्षी भएको छु । मनभित्र दुख्न थालेको छ । मलाई बोल्न मन छैन । कुरा गर्ने वा सुन्ने इच्छा पनि छैन । केही सोध्ने उत्सुकता पनि अब छैन ।
उसले आफ्नो सनग्लास झिकेर कमिजको फेरले एकपटक पुछ्यो र टाउकोमा राख्यो । प्रसङ्ग मोडियोस् भन्ने मेरो चाहनाले कुरा घुमाएँ । कस्तो गर्मी छ हगि ? उसले थप्यो तिमीलाई थाहा छैन यहाँ गर्मीमा असाध्य गर्मी र जाडोमा असाध्य जाडो हुन्छ । तिमी नयाँ छौ त्यसैले यहाँको हावापानी र मान्छेका व्यवहार थाहा छैन । बिस्तारै बुझ्दै जाने छौँ । मलाई त यो ठाउँ पटक्कै मनपर्दैन म आफ्नै ठाउँमा -देश) फर्किन चाहन्छु । जतिसक्दो छिटो फर्किने छु । तर मलाई यो पनि थाहा छ कि म फर्केर गएपछि उनीहरूले छोड्ने छैनन्, पक्कै मलाई मार्नेछन् । कुरा फेरि घुम्दै उतै पुगेको छ । हावीयर बोल्दै गयो – तर म डराउँदिन किन डराउने ? देश मेरो पनि हो । म त्यहाँको नागरिक हो । उनीहरूकै जत्तिको अधिकार मेरो पनि छ । देशको माया मलाई पनि छ । त्यसो भए तिमी पहिले किन भागेको त ? अब भने मलाई पनि सोध्न मन लाग्यो । मान्छेलाई मारिहाल्न त निकै ठूलो अपराध गर्नुपर्छ, तिमीले त्यस्तो के गरेका थियौँ र यसरी खेदो खनेका छन् त ? उसको जवाफ- खासै ठूलो कुरा होइन, तिमीलाई थाहा छैन जब देशमा अशान्ति र काटमार हुन थाल्छ । सोझा र निर्दोषहरू नै बढी हुन्छन् ज्यान गुमाउनेमा । बदमास र बाठाहरू त जोगिन सफल हुन्छन् । अशान्ति र युद्धहरू तिमीहरूले देखेको भोगेको भए पो थाहा पाउँथ्यो । आफ्नै अगाडि कति आफन्तहरूको ज्यान गएको छ त्यो त हामीलाई लिभाबासीलाई मात्र थाहा छ । सुरुमा उनीहरूले गुरिल्ला आर्मीमा जान सबै युवालाई आहृवान गरे । जान नमान्नेलाई जबरजस्ती पनि उठाए । नभेटाएकालाई धम्की दिइ नै रहेका छन् । मुख्य कारण यही नै हो । अब तिमी नै भन मेरो पनि इच्छाको कुरा हुँदैन र ? त्यो त हो मेरो सरल उत्तर । तिमीहरूको देशमा त शान्ति छ नि हैन ? उसको प्रश्न व्यङ्ग गरेझैँ लाग्यो । प्रतिउत्तरमा टाउको हल्लाएँ, मुखले कतै सत्य बोलिएला भनेर मुख बन्द नै गरिरहेँ ।
मलाई उसको कुरा सुन्दा दिक्क लागिसक्यो । जति कुरा मोडे पनि घुमिफिरी उतै पुर्याेउँछ । अब त आँटै गरेर सोधेँ- बेलुका काममा जानु पर्छ होला । तिमी कतिखेर गएर सुत्छौ त ? अब अलिकति हँसिलो अनुहार लगायो, बोतलमा बाँकी रहेको र विस्तारै तातिन थालेको कोक पियो र भन्यो- आज अर्कै साथीलाई सट्टामा जानु भनेको छु । भोलि मेरो छुट्टी हो आजको सट्टा भोलि काममा जान्छु । किनकि मलाई थाहा थियो यो ठाउँ टाढा छ, त्यहाँसम्म पुगेर फर्केर सुत्न ढिला हुन्छ । त्यही भएर पहिले नै कुरा मिलाएर आएको छु । अब गएर टी.भी. हेरेर बस्छु र बेलुका मात्रै सुत्छु । मलाई पनि अब आनन्द भयो । उसँग समयको अभाव छ भन्ने थाहा थियो, त्यै माथि पनि कुरोको लर्को एक पछि अर्को तानेर हैरान ।
तिम्रो अपार्टमा कति जना बस्छौँ ? उत्तरमा उसले भन्यो ।
हामी दुईजना छौँ र कम्पनीको अपार्ट हो । आफ्नै देशको हो वा अन्य देशको साथी हो ? कम्पनीले अपार्ट दिएको ठाउँमा कहिलेकाहीँ अरु देशकासँग पनि मिलेर बस्नुपर्ने हुन्छ ।
हैन ऊ ब्राजिल को हो । एउटै अपार्ट भए पनि हाम्रो भेट कहिलेकाहीँ छुट्टीको दिनमा मात्र हुन्छ । किनकि ऊ दिउँसो काम गर्दा मेरो राति हुन्छ र उसको राति हुँदा मेरो दिउँसो हुन्छ । यसरी आलोपालो हुन्छ । हामीसँगै जोडिएको अर्कोमा चाहिँ जापानिजहरू बस्छन् । त्यसको उता भने पेरुकै चारजना केटी बस्छन् । केटीहरू खाना मीठो पकाउँछन् । छुट्टीको दिन हामी पनि त्यहीँ गएर खान्छौँ । घरमै खाएजस्तो लाग्छ । नत्र सधैँ बेन्तो -जापानिज खाना कम्पनीले दिने गर्छ) खाँदा दिक्क लाग्छ । खाना त आफ्नै देशको मीठो हुन्छ । तर तिमी नेपाली पनि मीठो खान्छौँ । मसलाहरू भएको स्वादिलो खाना । मलाई मनपर्छ तिमीहरूको खाना ।
कहिले र कहाँ खायौ नेपाली खाना ?
विक्कीले पकाएर खुवाएको थियो एकपटक ।अब फेरि पनि आउ है नेपाली खाना पकाएर खुवाउँछु । उसले दङ्ग पर्दै भन्यो- अवश्य आउछु । तर एक दिन मात्र छुट्टी हुन्छ । मारियासँग घुम्न गएन भने रिसाउँछे ।
को मारिया ? तिम्रो साथी हो ।
साथी मात्र होइन उ त मेरो गर्लप|mेन्ड हो । उनीहरूकै मा त हामी छुट्टीमा मीठो खाना खान्छौँ ।
मारिया राम्री छन् ?
सबै भन्छन् त्यति राम्री छैन, ऊभन्दा अरु केटीहरू धेरै राम्री छन् । तर मलाई त ऊ एकदम राम्री लाग्छ । उसको मन राम्रो छ, त्यही भएर मलाई पनि राम्री लाग्छ ।
तिमीले उसको मन कसरी देख्यौँ त ?
उसको व्यवहारले, उसको बानीले, अनि उसले पनि त मलाई माया गर्छे । मन राम्रो भएर नै त गर्छे । तर अलि बढी खर्चालु छ, सपिङ धेरै गर्नुपर्छ । पैसा धेरै चाहिन्छ । म तिमीलाई भेटाउँछु नि है ?
मलाई असाध्यै खुसी लाग्ने छ मारियालाई भेटेर । तिमीहरू दुवैजना हामीकहाँ खाना खानेगरी आउ है । ऊ अति खुशी भयो र मेरो प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गर्योव ।
ऊ मारियासँग विहे गरेर अगाडिको जिन्दगी सुखले बाँच्न चाहन्थ्यो । घरको श्रीमतीलाई के गर्छौ नि ? के श्रीमतीलाई माया गर्दैनौँ ? मेरो प्रश्नको उसँग तयारी जवाफ थियो माया गर्छु तर उसँग बस्न सक्दिन । उसलाई पुग्ने सम्पत्ति छ छोरीहरू छन्, परिवार छ । तर अहिले यहाँ म एक्लो छु परिवार छैन, कोही आफन्त छैन, यस्तो बेला मारियाले माया गरेकी छ, मेरो एक्लोपन बाँडेकी छ, उसकै सहारामा मैले सुन्दर भविष्य देखेको छु, म उसँग खुसी हुन्छु भन्ने मलाई लाग्छ । यो तिमीहरूको आफ्नो समस्या हो जेसुकै गर, मनमा यस्तो विचार आए पनि मुखले बोलिन ।
अब भने हामी दुवैजनाको कोकको बोतल रित्तो भइसकेको थियो । अब जानुपर्छ मैले भनेँ । उसले सहमति जनायो । रित्तो बोतल फ्याँक्ने ठाउँ नभेटेपछि साइकलको क्यारिएर बक्समा राख्यौँ । बाटोका ठाउँ-ठाउँमा राखिएका प्लास्टिकको फोहोर हाल्ने, कागजहरूमात्र हाल्ने र पोलिथिनहरू हाल्ने गरी छुट्याइएका फोहोर फ्याँक्ने ठाउँमा मात्र फ्याँक्नुपर्छ नत्र जरिवाना हुन्छ । हामी जति बानी बिग्रेका भए पनि सामाजिक अनुसासनका नियमहरू कडा भएमा बानी सुधार्न बाध्य हुनुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्यो ।
हामी बिस्तारै बाटो लाग्यौँ । खासै कुरा भएन । म एक्लै आफ्नो अपार्टसम्म पुग्न नसक्ने भएकोले उसले त्यहाँसम्म पुर्या्उन जानुपर्ने थियो । बाटोभरि हावीका कुरा सम्झी रहेँ र पछिपछि हिँडिरहेँ ।
अपार्टछेउमा पुगेपछि तिम्रो ठाउँ आइपुग्यो तिमी जाउ म घर जान्छु भनेर बिदा माग्यो । कोठामा गएर कफी खान आग्रह गरेंँ र आफ्नो कोठामा गएर सुत्ने विचारमा थियो । मैले पनि कर गरिँन र धन्यवाद दिएर बिदा भएँ ।
कोठामा पुगेर पनि धेरैबेरसम्म हावीयर मेरो मनमा हावी भइरहृयो । उसका शब्द कानमा गुञ्जिरहे । उसको आक्रोस, घर छोड्नुको कारण, आमा, श्रीमती छोरीहरू मारिया, उसको सहर कस्तो होला ? उसको विचार, आशङ्का भविष्यको, अनि नेपालीहरू भाग्यमानी, सुन्दरशान्त देशका बासिन्दा आदि आदि …. ।
बाहिर असाध्यै गर्मी छ । तर घरभित्र एअरकन्डिसन जोडिएको हुनाले भित्र बस्दा गर्मीको पत्तै हुँदैन । चिया पिउँदै टी.भी. हेरेर बाँकी समय बिताएँ ।
बेलुका घरबाट फोन आयो लमहीको ब्यारेकमा आक्रमण भएछ केही सैनिकहरू विद्रोहीको कब्जामा छन् । केही भाग्न सफल । दुवैतिर केही घाइते । हातहतियार लुटियो व्यारेकको । तर आसपासका गाउँले सबै सुरक्षित छन् । त्यहाँ भएका हाम्रा आफन्तहरू सुरक्षित छन् । चिन्तालिनु पर्दैन । यहाँ भएका अहिलेसम्म ठीक छौँ । अहो हावीयरले तारिफ गरेको शान्त देशबाट आएको पीडादायी खबर । दिनभरि हावीयरले प्रसंसा गरेको शान्तिको कल्पना गरेँ । त्यस्तै भए कति रमाइलो हुँदो हो जीवन ।
त्यसपछि हावीयरसँग मेरो फेरि भेट भएन । ऊ मारियालाई लिएर खाना खान पनि आएन । त्यसको केही महिनापछि कामको सिलसिलामा म अर्कै सहर गएँ । त्यसैले पनि भेट भएन होला ।
कतिपय उतार-चढावका साथ समय चिप्लिरहृयो पत्तै भएन । एकदिन विक्कीले फोनमा हावीयरको मृत्युको खबर सुनायो । यी दुईजना एकदम मिल्ने साथी थिए । यस्तो खबरले विक्की पनि अत्यन्त दुखी थियो ।
हावीयर निकै पहिले पेरु फर्केको रहेछ । अन्त्यमा उसको भविष्यप्रतिको पूर्वानुमान या आशङ्का सत्य भएरै छोड्यो । अनि मारिया ? मारियाले पनि उसलाई धोखा दिई । उसँग भएको पैसा सबै सिध्याइदिई र अर्कै केटालाई मन पराउन थालेपछि यिनीहरूको सम्बन्ध खराब भएछ । पैसा पनि जम्मा गर्न सकेन । मारियाले गरेको विश्वासघातले ऊ साह्रै दुखी भएर खाली हात घर फक्र्यो । र केही समय पछि नै उसको हत्या भयो ।
खबर दुःखदायी थियो तर सत्य थियो । देशलाई माया गर्ने एउटा देशभक्त देशमा त फक्र्यो तर उसलाई बाँच्ने अधिकारबाट वञ्चित गराइयो । उसको त्यो अनुहार र सहयोगी विचार मलाई अझै याद छ । यति असल मान्छेको पनि यस्तो दुर्गति, पीडा र अन्त्यमा बिनाकारण मृत्यु्, हत्या । विचरा ऊ कति इमान्दार थियो मारियाप्रति पनि । तर गर्न पनि के सकिँदो रहेछ र श्रद्धाञ्जलि दिनुबाहेक । मनैदेखि भन्न मन लाग्यो- अलबिदा हावी ।
Posted in Indira Shaha
Tagged Indira Shaha - Albida Hawi Indira Shaha's Nepali Story Albida Hawi Literary work of Nepali Story Writer Indira Shaha Literatures of Nepali Story Writer Indira Shaha Nepali Author Indira Shaha Nepali Katha Nepali Katha Albida Hawi by Indira Shaha Nepali Kathakar Nepali Kathakar Indira Shaha Nepali Rachanakar Kathakar Indira Shaha Nepali Sahitya Nepali Sahityakar Nepali Stories Nepali Stories By Indira Shaha Nepali Stories Collection Nepali Stories Collection Of Indira Shaha Nepali Story Nepali Story Albida Hawi by Indira Shaha Nepali Story Blog Nepali Story Website Nepali Story Writer Nepali Story Writer Indira Shaha Sahityakar Indira Shaha Ka Nepali Katha Haru